Imininingwane Yomkhiqizo I-baler iwuhlobo lomshini wokulinganisa otshani ongakwazi ukuqedela ngokuzenzakalelayo ukuqoqwa, ukugoqwa nokubhaliswa kwelayisi, ukolweni kanye nezikhwebu zommbila kukwenza kube yiRound Hay Baler. Isetshenziselwa kabanzi ukuqoqwa kwamadlelo awomile naluhlaza, ilayisi, ukolweni, nezikhwebu zommbila. Ukubopha. Umshini unezici zesakhiwo esihlangene, ukusebenza okulula nokuthembeka okuphezulu. Idlelo elihlanganisiwe lingasetshenziswa njengokudla, ukonga izindleko zokondla izinkomo nezimvu. Ikhasi elifanayo ...
Umkhiqizo Imininingwane Isithelo sesithelo semifino ngumshini omkhulu ofanele wokufafaza izibulala-zinambuzane ezindaweni ezinkulu zezithelo. Inezinzuzo zekhwalithi enhle yesifutho, ukusetshenziswa okuphansi kwezibulala-zinambuzane, ukusetshenziswa kwamanzi okuphansi nokusebenza kahle kokukhiqiza. Ngaphezu kwalokho, akuthembeli ekucindezelweni kwepompo ketshezi ukwenza uketshezi lube yi-athomu. Esikhundleni salokho, umlandeli udala umoya onamandla ukushaya amaconsi ezingxenyeni ezahlukahlukene zesihlahla sezithelo. Ukuhamba komoya okuphezulu kwe-fan kusiza amaconsi ukuthi angene eminyene ...
Imininingwane Yomkhiqizo i-RY3W boom sprayer ifanelekela zonke izinhlobo zogandaganda, ukusetshenziswa okuguquguqukayo, ukusebenza okulula, okuvame ukusetshenziselwa ukuqeda izifo nezinambuzane ezinambuzane, isifutho se-foliar kanye ne-weedicide spray. Isifutho sokumisa ugandaganda silungele ukufafaza izilimo emathafeni amakhulu, futhi silenga ngemuva kukogandaganda. I-PTO drive shaft ixhuma ugandaganda kanye nesifutho umfutho wokumpompa futha, kanti ingcindezi futha iphampa umuthi enduku yesifutho bese ufafaza nge-noz ...
Umshini Wenkungu Ephathwayo
Imininingwane Yomkhiqizo I-atomizer entsha isebenzisa ubuchwepheshe besimanjemanje be-rocket, injini ye-jet jet engayigcini isesimweni sokulungisa, azikho izingxenye ezijikelezayo, alukho uhlelo lokuthambisa, isakhiwo esilula, akukho ukugqoka phakathi kwezingxenye, isilinganiso sokuhluleka okuphansi, impilo yenkonzo ende, nokugcinwa okulula. Ngokusebenzisa uphethiloli ophansi nokusebenza kahle okuphezulu, kungumkhiqizo ofanele wobuchwepheshe obuningi bokufafaza i-pesticide kanye ne-disinfection.Umshini ungumshini wezinhloso ezimbili onenani elifanele nekhwalithi ezinzile. Inzuzo 1. Lo mshini ...
Imininingwane Yomkhiqizo Mini ovunayo isibopho ngumkhiqizo omusha onobuchwepheshe obuthuthukile kanye nempahla eyi-Own, okuwuhlobo oluyingqayizivele eChina. Inesistimu yokuqondisa ehlukile, igxilisa kalula. Lo mshini usetshenziselwa ukuvuna futhi ubophe izitshalo eziphansi ezifana nokolweni, ilayisi, ibhali, i-oats, njll. Kusebenza emagqumeni, emithambekeni, emasimini amancane, njll. Ngaphezu kwalokho, kunezinzuzo zevolumu encane, icwecwe isakhiwo, ukuvuna okuphelele, izinhlanga eziphansi, ukubopha okuzenzakalelayo, nokubeka, ...
Imininingwane Yomkhiqizo I-windrower uhlobo olukhethekile lokuvuna izinhloso, ihlukaniswe ngezinhlobo ezintathu: ezizimele, edonswa ngogandaganda futhi emisiwe. Umshini ulungele kakhulu ukuvuna irayisi, idlelo, ukolweni, ummbila, njll. Isitshalo singanqunywa futhi sisabalale ezinqoleni ukuze sibe ngumshini wokuvuna okusanhlamvu odlula imisila yezindlebe ukuze yomiswe. Izinhlamvu ezomisiwe ziyacoshwa futhi zivunwe ngesivuno sokuhlanganisa okusanhlamvu ngesikhethi Ububanzi bokusika bomvuni bondliwe ngokuphelele ...
Imininingwane yomkhiqizo Ugandaganda ohamba ngohlobo lomkhiqizo i-tow bese ushayela ugandaganda ohamba ngezinhloso ezimbili. Inesakhiwo esincane futhi esihlanganisiwe, engasindi, ukusebenza okuthembekile, impilo ende yokusebenza, ukusebenza okulula, nekhono lokugijima elihle. Imikhiqizo isetshenziselwa umhlaba owomile, amasimu we-paddy, izintaba nezingadi zezithelo, iziza zemifino, njll. Ikwazi ukulima, ukulima ngokujikeleza, ukuvuna, ukubhula, ukuchelela, neminye imisebenzi yezinkambu nokuthutha kungenziwa. Ingaxhunyaniswa ngqo ...
Umkhiqizo Imininingwane Ugandaganda ngumshini ozisebenzelayo ozisebenzelayo ukudonsa nokushayela imishini yokusebenza ukuqedela imisebenzi ehlukahlukene yeselula. Ingasetshenziselwa amandla wokusebenza ahleliwe. Siqukethe amasistimu noma amadivayisi anjengenjini, ukuhambisa, ukuhamba, isiteringi, ukumiswa kwe-hydraulic, ukukhipha ugesi, okokusebenza kagesi, ukulawula ukushayela nokudonsa ngamandla. Amandla enjini adluliselwa kusuka ohlelweni lokudlulisa kuya emasondweni okushayela ukwenza ugandaganda ushayele. Empilweni yangempela, kujwayelekile ...
Imininingwane Yomkhiqizo Ugandaganda omncane omncane ulungele amathafa, izintaba, nezindawo ezinamagquma, kuhlanganiswe namathuluzi afanele atholakalayo okulima, ukulima okujikelezayo, ukuvuna, ukutshala, ukubhula, ukupompa, neminye imisebenzi, ukuthutha ibanga elifushane ngamathreyila. Ugandaganda omncane uyi-drive-drive, kepha une-hydraulic yokuphakamisa naphansi. Ingafanisa kuphela imishini yamapulazi eyingqayizivele namathuluzi, afana nokuhamba ngogandaganda. Izinzuzo: intengo ephansi futhi kulula ukuyisebenzisa. Isici 1. kungashisa ...
Imininingwane Yomkhiqizo Izimbewu zemishini zinemigqa emi-2, 3 ezi-4, ezi-5, ezi-6 nezingu-8. kufaka phakathi ukusabalalisa iyunithi, izinyawo zokuhlwanyela, ama-disc coulters nama-disc, ibhokisi lomanyolo. Imishini yembewu isebenza ngohlelo lokukhanda. Umshini wokutshala ufakelwe uhlelo lokuxhumanisa olunamaphuzu amathathu. Ingahanjiswa kalula iye ensimini. Izimbewu zemishini zingasetshenziselwa ukuhlwanyela okuqondile. Umshini ungasetshenziselwa ukuhlwanyela izinhlobo ezahlukahlukene zembewu (njengombila, ubhekilanga, ukotini, isithombo sebhitrudi, usoya, ipinathi kanye nephuphu ...
Imininingwane Yomkhiqizo Umshini wokutshala imifino ungafinyelela okusanhlamvu okulodwa emgodini ngamunye noma izinhlamvu eziningi umgodi ngamunye. ingakusindisela imbewu Ibanga lokutshala nokujula kokutshala nakho kungalungiswa. Ingasetshenziselwa ukuhlwanyela izaqathe, ubhontshisi, u-anyanisi, isipinashi, ulethisi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi, iklabishi, i-rapeseed, pepper, i-broccoli, nezinye izinhlobo zembewu encane yemifino namakhambi. Isondo lokutshala lalesi sitshalo sembewu yemifino senziwe ngezinto ezikhethekile, eziphikisana ne-static, ezinganamatheli embewini ngakho ...
Imininingwane Yomkhiqizo Iziza ezincane ezisetshenziselwa ummbila, ukotini, ukolweni, izitshalo ze-legume, amabele, amakinati nezinye izimbewu ezithambile ezithambile ngenkathi kutshalwa ngokuvamile kuyindlela yokufakelwa yokuhlwanyela, ukuvundisa, ngale ndlela kulula ukwenza abantu bakhathale, ukusebenza kahle kokuhlwanyela, izinto zabantu zithinta ukuhluma nokukhula kwezimbewu ezithile, okuholele ekuvuneni okuphansi. Lo mkhiqizo uhlobo lwesandla esiphethwe umanyolo, nokusebenza kahle okuphezulu, umshini wokutshala ophethwe ngesandla osheshayo ophethwe ngesandla. Isandla ...